Nagu saabsan - Hong Bang Baako Co., Ltd.
Hong Bang Baako Co., Ltd.
oo la aasaasay 2000, waa soo saare karti leh oo ku takhasusay Shiinaha oo ku takhasusay daabacaadda midabka caagga ah iyo laminating qalabka wax lagu duubo ee dabacsan, filimada faaruqinta metallized iyo filimada waxqabadka badan.
Wax soo saarkeenu wuxuu daboolayaa cuntada, kiimikooyinka maalinlaha ah, dawooyinka, agrochemicals, elektaroniga, qalabka dhismaha iyo meelaha kale. Hadda waxaan haynaa seddex shirkadood, Hong Bang (Hong Kong) Baako, Hong Bang (HUIZHOU), oo dhammaantood ku raaxeysta helitaanka gaadiid ku habboon ee loo maro Hong Kong iyo dekedda ShenZhen.
Warshaddeenu waxay ku taal HuiZhou.
Ku soo dhawow inaad soo booqato aqoon isweydaarsigayaga boodhka ka caagan
Warshadeenu waxay la kulantaa heerka mishiinka iyo otomaatiga. Shaqaalaheena iyada oo loo marayo tababarka wax soo saarka xirfadeed, si adag u raacaan heerarka wax soo saarka si ay u shaqeeyaan. Hadda shirkadeennu waxay ku qalabeysan tahay in ka badan siddeetan xariiq oo wax soo saar ah oo ay ku jiraan afar iyo toban daabacadood oo midabbo leh, laminators xawaare sare leh, mashiinno samaynta boorsooyinka iyo mashiinno duubis badan.
Sawirro Warshad Badan
Waxaan si adag u adeecnaa nidaamka maaraynta ee ISO9001, ISO14001 iyo ISO22000, waxaan sidoo kale helnay BRC, FDA iyo 63 shatiyada. Waxaan bixinaa xalka baakadaha, nashqadaha waxaanna soo saarnaa noocyo kala duwan oo midabbo qurxoon u leh daabacaadda midabka Maaddaama aan aaminsanahay in hal-abuurnimadu ay ka dhalan doonto mustaqbal ifaya, waxaan nafteenna u huraynaa inaan abuurno cilmi baaris iyo horumarin ballaadhan iyo saldhigga warshadaha hi-teknolojiyadda ee xirmooyinka xirmooyinka cagaaran, iyadoo loo marayo iskaashi qoto dheer oo lala yeesho hay'ado cilmi baaris oo fara badan oo ku yaal Shiinaha iyo kuwa caalamiga ah. shirkadaha baakadaha caanka ku ah. U heellan xakamaynta tayada adag iyo adeegga macaamiisha ee fikirka leh, xubnaheenna khibrada leh ayaa had iyo jeer diyaar u ah inay ka wada hadlaan shuruudahaaga oo ay hubiyaan qanacsanaantaada. Hadday amarkaagu yar yahay ama weyn yahay, fudud yahay ama dhib badan yahay, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto. Adeeg wanaagsan iyo tayo qanacsan ayaa had iyo jeer kula socota.